Ukutshona kwelanga Smart iSebe
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguSteven
Ukulawulwa kwelizwi kuyo yonke indlu nge-Alexa! Ifulethi langoku kwaye likhululekile kunye ne-ALEXA evela eAmazon, yabucala ene-intanethi ilungele ukunxibelelana ngocingo, kunye nesitshixo sedijithali. Kufuphi nePlaza Cayma, iindawo zokuthenga eziphambili kunye nezinto ezinomtsalane kubakhenkethi. Isiqingatha sebhloko ukusuka kwindlela enkulu enezithuthi zikawonke-wonke okanye iiteksi, indawo ekhuseleke kakhulu.
Iifestile ezinkulu ezinombono omangalisayo wokutshona kwelanga e-Arequipa, kunye neerola ezimnyama ukuba ufuna ubumfihlo obungakumbi. Iinkonzo ezisisiseko WiFi 100Mbps, SmartTV.
Indawo ye "Sunset Smart Department" isembindini kwaye ikhuselekile. Yiza wonwabele eyona mbono ilungileyo yokutshona kwelanga kwe-Arequipa, ukusuka eluphahleni lwesakhiwo unokubona yonke iArequipa.
Ikufuphi nePlaza Cayma, apho unokonwabela izitya zesintu ezifana neAdobo esuka eArequipa, isosi yaseMelika enesiqholo, iihagu zehagu, njl. Kwakhona kufutshane ne-Av. Ejército eneziko lezemali, iindawo zokuthenga, iindawo zokutyela kunye neekhemesti.